H1N1 is coming, Let’s prevent ourselves! | The World of Pinkgold
ညီလင်းဝင်း on June 30, 2009 at 4:27 am said:
ခုလောလောဆယ်တော့ ငါ့ကိုယ်ငါ ဂရုစိုက်နေတယ် ငါကဝပြီးကိုယ်ခံအားကောင်းတော့ ဘာမှဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။နင်ကပိန်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတိထားပါ စာရေးသူ 😛
strike on June 30, 2009 at 7:09 am said:
cuttiepinkgold on June 30, 2009 at 7:13 am said:
အဘတို့များ ခုမှပဲ ဘလောဂ့်ကို လာဖတ်တော့တယ်နော်.. ဌာနေကို ပြန်ရောက်သွားပြီ ထင်ပါ့
AATO on June 30, 2009 at 10:16 am said:
I have come to learn about your post (H1N1 is coming, Let’s prevent ourselves!).. Thanks for sharing this..
strike on July 1, 2009 at 3:44 am said:
san on July 1, 2009 at 11:09 am said:
Thanks for ur sharing!!!
upasaka on July 2, 2009 at 11:12 am said:
ကောင်းတယ် ဗျာ မသိရသေးတာ တွေသိ ရတယ် အကျိုးရှိ ပါတယ်
Moss on July 16, 2009 at 3:28 pm said:
Hi Pls Ad for me this website